Soomaali caawimaad iyo taageero - Cyfrifiad 2021
Soomaali caawimaad iyo taageero : Guudmar
Waxyaalaha uu ka kooban yahay
Ku buuxinta tirokoobkaaga internet-ka
Ku buuxinta tirokoobkaaga waraaqda
Waa maxay tirokoobku?
Tirokoobku waa xog-ururin dhacda 10 sanno oo kasta oo sawir inaga siisa dhammaan dadka iyo qoysaska ku nool England iyo Wales. Tirokoobka soo socdaa wuxuu dhacayaa Axadda 21 Maarso 2021.
Macluumaadka laga uruuriyey tirokoobka waxay caawimo ka siisaa qorshaynta iyo maalgelinta adeegyada bulshada ee xaafaddaada, oo ay ku jirto adeegyada luqadda. Tusaale ahaan, NHS ayaa laga yaabaa in ay u baahan tahay in ay bixiso adeegyo turjumaad ah gobollada qaarkood.
The Office for National Statistics (Xafiiska Tirokoobka Qaranka) (ONS) ayaa qorsheeya fuliyana tirokoobka ee England iyo Wales.
Yay tahay in uu buuxiyo tirokoobka
Tirokoobka wuxuu weydiiyaa su'aalo ku saabsan adiga iyo qoyskaaga, waana muhiim in qof walba oo jooga England iyo Wales uu ka qayb qaato.
Sharci ahaan waa in aad buuxisaa tirokoobka
Waa denbi in aad bixiso macluumaad been ah amaba aadan buuxin tirokoobka waxaana lagugu ganaaxi karaa ilaa £1,000. Su'aalaha qaar ayaa si cad loogu calaamadiyey in ay yihiin kuwo qofku ikhtiyaar u leeyahay in uu ka jawaabo. Maaha fal dembi haddii aad kuwaas ka jawaabi weydo.
Macluumaadkaaga shakhsiyeed waxaa ilaalinaya sharciga, waxaana loo hayn doonaa si qarsoodi ah
Joogitaanka UK wax ka yar saddex bilood
Mas'uul kama tihid in aad tirokoobka buuxisid haddii aad UK joogeysid wax ka yar saddex bilood. Qofka leh deegaanka aad degan tahay ayaa laga yaabaa in uu su'aallo ku weydiiyo si ay u buuxiyaan tirokoobka ku saabsan dadka qoyskooda jooga.
Xilliga ay tahay in aad buuxiso tirokoobkaaga
Dhammaan qoyska waa in ay buuxiyaan tirokoobka maalinta Axadda 21 Maarso 2021 ama sida ugu dhakhsaha badan ee ka dib ah.Haddii aad ka soo jawaabtey ka hor 21 Maarso arimuhuna ay is beddeleen, waad nala socodsiin kartaa.
Duruufahaaga ayaa laga yaabaa in ay is beddeleen intii lagu jiray musiibada coronavirus. Ka jawaab dhammaan su'aalaha iyadoo ku saleysan sida ay hadda duruufahaagu yihiin.
Sida aad u buuxinayso tirokoobkaaga
Waxaad dooran kartaa ama:
in aad tirokoobkaaga ku buuxisid internet-ka
in aad tirokoobkaaga ku buuxisid warqadda
Ku xigta page in this guide is: Ku buuxinta tirokoobkaaga internet-ka
Khadka caawimada luuqaddaha ee lacag la’aanta ah
efoonka: 0800 587 2021
8-da subaxnimo ilaa 8-da fiidnimo (Isniin ilaa Jimce)
8-da subaxnimo ilaa to 1-da duhurnimo (Sabti)
Todobaad-dhammaadka tirokoobka 20 – 21 Maarso: 8-da subaxnimo ilaa 8-da fiidnimo